दलाई लामाको अभिब्यक्ति किन ?
काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि धर्म गुरु दलाई लामाले बुद्ध नेपालमा जन्मेको होइनन भनेर दिएको अभिब्यक्तिको खण्डन गरेका छन । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरुमा बुद्ध नेपालमा जन्मेका होइनन भनेर दलाई लामाले दिएको अभिब्यक्तिको तीब्र आलोचना भएपछि उनले बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन भनेर अभिब्यक्ति दिएका छन । आफ्नो अफिसियल वेवसाइटमा सो कुराको बारेमा उनले भनेका छन, गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका हुन तर ज्ञान चाँही भारतमा हाँसिल गरेका हुन् । ‘बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको कुरा बिश्वले चिन्दछ । तर बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेपनि ज्ञान चाँही भारतमा ज्ञान हाँसिल गरेका हुन ।’ उनले आफ्नो स्पष्टिकरणमा बताएका छन् । साथै, बुद्धले भारतमा हाँसिल गरेको ज्ञानलाई एसिया भरीनै सबैले आत्मशरण गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । तर उनले समारोहमा दिएका अभिब्यक्तिमा लामाले बुद्ध नेपालको होइन भन्ने अभिब्यक्ति दिदै भारतको रहेको दाबी गरेका थिए । अहिले पनि भाइरल भइरहेको सार्वजनिक भिडियोमा लामाले अभिब्यक्ति दिँदै ‘तपाँईलाई था छ, बुद्ध नेपाली हो की इण्डियन ?’ भन्ने प्रश्नकासाथ नेपालीहरुको हाँसो उडाउँदै बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्नेहरुलाई ननसेन्स भनेका थिए ।
भारतको मेरठमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सो अभिब्यक्ति दिएका थिए । दलाई लामाले थाहा नभएर होइन, बिशेष रणनीतिका साथ बुद्ध नेपालमा नजन्मेको अभिब्यक्ति दिएका थिए । पश्चिमी राष्ट्रलाई खुसी बनाउन, भारतमा बसेर चीनलाई धम्क्याउन र नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरुको गतिबिधिमा नियन्त्रण गर्न नदिने योजना अनुसार उनले सो अभिब्यक्ति दिएको बताइन्छ । सन् १९५९ मा देश छोडेर भागेदेखि भारतको हिमाचलस्थित धर्मशालामा पश्चिमा र भारतीयहरुको लगानीमा सुखमय जीवन बिताइहेका छन । त्यही भएर उनले पटक पटक भनेका छन, ‘मैले पाँच दशक भारतको नुन र रोटी खाएको छु, यति लामो समय यहाँको अन्नपानी खानुको अर्थ शारीरिक रूपले यहीँको हुनुसरह हो, यहाँ रहँदा मैले तिब्बतबाट छुट्टिनुपरेको अनुभूति गर्नुपरेको छैन, किनकि यहाँ स्वतन्त्रता छ, मलाई आफ्ना कुरा उठाउन सजिलो भएको छ जो तिब्बतमा रहेर म गर्न सक्दिनथेँ ।’ अर्थात उनले भारतमा बसेर चीनबिरोधी गतिबिधि गरिरहेको स्वीकार गरेका थिए ।
चीनले भारतसँगको नाकामा अत्यन्त कडाई गर्ने गरेको कारण उनले नेपालमा रहेका एजेण्ट मार्फत स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान सञ्चालन गर्न सहज हुने उनको बुझाई थियो । देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु अघि गोवामा तिब्बतका कथित प्रधानमन्त्री भनिएका लोप्साङ साङ्गेसँग भेट र छलफल गरेका थिए । सोही भेट र छलफलबाट खुसी भएर भारत र पश्चिमी राष्ट्रहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेका थिए । तर दलाई लामाको चाहना अनुसार नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतको नारा लाग्न सकेन । न त कुनै गतिबिधि नै सञ्चालन गर्न सके । बरु चीनको कडा चेतावनी र प्रशासन संयन्त्रको कडा निगरानीको कारण स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरुले कुनै गतिबिधि सञ्चालन गर्न सकेनन् । नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरु कमजोर बनेकै कारण त्यसको आक्रोसको रुपमा पनि दलाई लामाको यो अभिब्यक्ति आएको हुनसक्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघसमेतले बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन भनेर लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिसकेको छ । यो बिषय दलाई लामाले थाहा नपाउने कुरै भएन । यो बिषयलाई भारतमा भ्रम छर्न भारतले पाठयक्रमदेखि कतिपय अबस्थामा बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन भनेर राख्ने गरेको छ । भारतले बुद्धलाई नेपालबाट खोस्न धेरै पटक प्रयास गर्दै आएको छ । चीनलाई धम्क्याउन मात्र होइन, बुद्धको नाममा ब्यापार गर्न पनि भारतले नयाँ लुम्बिनी बनाएको देखि धेरै प्रकारका षडयन्त्रहरु पटक पटक गर्दै आए पनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन र सफल हुन सक्ने पनि छैन । तर यस्ता षडयन्त्रहरु भने जारी रहन्छन । दलाई लामाबाट नै ओकल्न लगाएपछि केही होला भन्ने भारतको आशा थियो । तर दलाई लामा आफैले यस्को खण्डन गरेपछि भारतीय प्रयास ‘हात्ती आयो आयो, हिस्स भयो’ भनेजसस्ते भएको छ । भारत र पश्चिमाहरुको सहयोगमा दलाई लामा र उनका समर्थकहरुले चुनावको मुखमा नेपालमा रहेका करीब २० हजार तिब्बती शरणार्थीमध्ये चार हजारजतिको शरणार्थी प्रमाणित हुने कुनै कागजात नभएको भन्दै त्यसलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्न दलहरुसमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए । प्रो. सामदोङ रेम्पोछे को नेतृत्वको एक टोली नेपाल आएर स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरसँग पैसा लिने नेताहरुसँग भेटेर यस्को लबिङ गरेको थियो । तर कुनै पनि दलले त्यो प्रस्ताव मानेनन । शिर्षस्थ नेताहरुले त थाहा नै पाएनन ।
राजनीतिक सम्बोधन गराउने प्रयास असफल भएपछि केहीलाई निर्वाचन बिरोधी गतिबिधिमा समेत सहभागी गराइएको थियो । केही दिन अघि मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले तिब्बती शरणार्थी वाङदुङलाई निर्वाचन गतिबिधि गरिरहेको अबस्थामा पक्राउ गरेको थियो । पोखराडाँडाको नाक क्षेत्रमा निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले तिब्बती शरणार्थी तासी वाङदुङलाई पक्रेको हो । नेपाली युवतीसँग विवाह गरेका उनले पोखरामा ट्याक्सी चलाउने काम गर्दै आएका वाङदुङ पोखराको पेन्जोलिङ तिब्बती क्याम्पमा बस्छन् । प्रहरीले उनीमाथि सार्वजनिक मुद्दा लगाएको छ । वाङदुङ एक्लै हुन् या अन्य तिब्बती शरणार्थी पनि निर्वाचन बिरोधी कार्यमा संलग्न छन भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । तर निर्वाचन बिरोधी गतिबिधिमा संलग्नहरु हिमाञ्चल प्रदेशमा रहेको धर्मशालाबाटै सञ्चालित भएको बताइन्छ । राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गराउन र निर्वाचन बिरोधी कार्य गर्ने प्रयास समेत असफल भएपछि निर्वासनमा रहेको तिब्बती संसदकी उपसभामुख डोल्मा ग्यारीले अनुयायीहरुसँग नेपाली मिडियाले चीनको तरफदारी आवश्यकताभन्दा बढी गरिरहेको र नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि तिब्बतीको समस्याबारे कुनै चासो नदिएको भनेर आक्रोस ब्यक्त गरेको दाबी समाचार स्रोतको छ ।
दलाई लामाको सम्पुर्ण टिम नै नेपालबाट उनीहरुको बारेमा केही न केही सम्बोधन होस भन्ने चाहन्थे । तर एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरुले दलाई लामाप्रति कुनै वास्ता गरेनन् । त्यही कारण दलाई लामाको जन्मदिनमा पनि उनीहरुले कुनै कार्यक्रम गर्न सकेनन् । बन्द कोठामा गरिएको कार्यक्रम पनि असफल भएको थियो । नेपालमाथि चीनको निरन्तर दबाब र स्वतन्त्र तिब्बती पक्षधरमाथिको पहुँचको कारण स्वतन्त्र तिब्बतीहरु असाध्यै कमजोर बनेका छन । चीनका बिरुद्ध भारतीय भूमीमा बसेर अनेकौं षडयन्त्र गर्दै भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ र अमेरिकन जासुसी संस्था सिआइएको लागि काम गर्दै आएका दलाई लामाले स्वतन्त्र तिब्बत गतिबिधि बलियो बनाउन नसकेपछि नेपालबिरुद्ध षडयन्त्र गर्न थालेका हुन । उनी अहिले नेपालप्रति असाध्यै नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरुबीच गाईगुई चल्न थालेको छ । उनीहरु दलाई लामाले नेपालप्रति षडयन्त्र गर्न थालेकै कारण नेपालभन्दा भारतमा बढी बस्न थालेका छन । नेपालमा बस्दा जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्ने कारण स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरुबीच भय पैदा भएको बताइन्छ ।
भारतले नेपालको चीनसँग बढदो सामिप्यता अन्त्य गर्न बिभिन्न समुहहरु परिचालन गरिरहेको छ । बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना खारेजी त्यसैको उदाहरण हो । देउवा सरकारले एक चीन नीतिप्रति बिमति जनाउन नसकेपछि र स्वतन्त्र तिब्बतीहरुको संरक्षण गर्नै नसक्ने अबस्था आएपछि अन्य प्रशासनिक काममा भने चीनलाई साथ दिन छोडेको संकेत दिन सो निर्णय गरेको बताइन्छ । भारतले चीनबिरोधीहरुलाई उक्साउन केही ब्यक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ । ‘न्यू ईण्डिया फाउन्डेसन’ को नेपाल मनीटरीङ गर्ने अजित डोबालका छोरा र ‘आर एस एस’ को प्रबत्ता तथा हाल बिजेबीको महासचिबसमेत रहेका राम माधबको समुहलाई सक्रीय बनाइरहेको छ । डोबाल भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सहल्लाकार समेत हुन । सो समुहले बिभिन्न बहानामा नेपालका सत्ता साझेदार नेता देखी अन्य दलका नेतालाई जालमा पारेर चिन बिरोधी कार्यक्रम तथा दलाई लामा निकटहरुलाई भेटाउँदै आएका छन् । सोही समुहको इशारामा देउवाले गोवामा सहभागिता जनाएका थिए ।
अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईए पनि दलाई लामालाई निरन्तर सहयोग गरिरहेको संस्था हो । त्यही भएरै सिआइएमा ४४ वर्षसम्म विभिन्न हैसियतमा रहेर काम गरेका जोन केनेथ नसले सन् १९९५ मा सेवानिवृत्त भएपछि दलाई लामालाई सोधेको भन्दै एक प्रश्न चर्चामा आएको थियो । जसमा भनिएको थियो, सीआईएले तपाईलाई सहयोग उपलब्ध गराएर ठीक÷बेठीक के ग¥यो ? जवाफमा दलाई लामाले सीआईए प्रशिक्षित छापामारहरूले आफूलाई ल्हासाबाट भगाएर सुरक्षित रूपमा भारत पुग्न सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए । यो कुरा १८ जुलाई १९९९ मा नसको ’अग्र्यान्स अफ दी कोल्ड वार’ पुस्तकको समीक्षा क्रममा जोनाथन मिर्सकीले न्युयोर्क टाइम्समा लेखेका छन् । त्यसको २० बर्षपछि पनि यो रवैयामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । सिआइएले सहयोग गरेका ब्यक्तिहरु कालान्तरमा अमेरिका बिरोधी बन्ने गरेका थिए । ओसामा बिन लादेनदेखि सद्दाम हुसने त्यसैका उदाहरण हुन । तर दलाई लामा यस्तो ब्यक्ति हुन जो ५८ बर्षदेखि अर्थात सन १९५९ देखि सिआइएको हतियारको रुपमा काम गरिरहेका छन । रअ र सिआइए दुवैले संयुक्त रुपमा प्रयोग गरिरहेका दलाई लामालाई युरोपियन युनियनको पनि उल्लेख्य सहयोग छ ।
नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बती पक्षधरहरुले चाहेजति रकम खर्च गर्न सक्नुको कारण पनि पश्चिमाहरुको सहयोग नै हो । तर पछिल्लो चरणमा चीनको सहयोगमा नेपालको प्रशासन यन्त्रले स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरुलाई च्याप्दै लगेको छ । निर्वाचनपछि बाम सरकार आउने भएपछि स्वतन्त्र तिब्बतीहरु झन् अप्ठयारोमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको दलाई लामाको टिमले भविष्यमा बन्ने सरकारमा पश्चिमाहरुको एजेण्डा घुसाउने तयारी समेत गरिरहेको छ । दलाई लामा मार्फत धम्क्याउने र पश्चिमाहरुले बिभिन्न सहयोग गर्ने नाममा चीनविरोधी गतिविधि गर्ने योजना बनाइएको छ । सोही योजनाको एउटा पाटो हो, दलाई लामाको अभिब्यक्ति । तर उनी त्यसमा टिक्न सकेनन । केही वर्षदेखि भारतका बिभिन्न धर्मशालामा नेपालबिरुद्ध प्रदर्शन समेत हुने गरेको छ । त्यस्ता प्रदर्शनले अहिले महत्व नै पाउन छोडेका छन । त्यही भएर दलाई लामाको टिम आत्तिएको छ । त्यही आत्तिएर यस्ता अभिब्यक्ति र गतिबिधि भविष्यमा पनि हुने नै छ ।